Ukuphupha ityhubhu Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Kwelinye icala, umbhobho ungathetha umbhobho wecuba, othi kubantu abaninzi unxulunyaniswe ngokungenakwahlukaniswa nentuthuzelo kunye nokuphumla. Ngokungafaniyo necuba, umbhobho utshaywa kancinci kancinci kwaye nangamandla amakhulu, kwithuba elide.
Kwelinye icala, kukho impempe, esinokuthi ngayo sivelise izandi ezimnandi kakhulu nezingxolayo. Isixhobo esinjalo sisetyenziswa ngokubanzi kwezemidlalo, njengoqeqesho, ukufundisa abadlali. Impempe inokusetyenziselwa ukubonisa umsindo ngokubetha umlozi okanye ukutsala umdla, umzekelo, kwimiboniso. Ukuqeqesha izinja, abantu bayathanda ukusebenzisa impempe yenja, esebenzisa i-ultrasound ukwenza iithowuni eziphezulu ezinokuthi abantu bangeva nokuva, kodwa isilwanyana esineendlebe ezingcono asinangxaki.
Loluphi uhlobo lombhobho ngoku olubonakeleyo kwihlabathi lamaphupha akho? Ukulungiselela ukutolika ngokuchanekileyo umfanekiso wephupha, kuluncedo ukubandakanya umxholo jikelele wephupha kuhlalutyo lwamaphupha. Iimeko zokuphila zomntu ngamnye kufuneka zithathelwe ingqalelo.
1 Uphawu lwephupha «impempe» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umbhobho» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umbhobho» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «impempe» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, isandi sombhobho ephupheni sinokusenza sazi isiphelo sesigaba sobomi. Impempe ixela umphuphi ukuba ixesha lifikile, isiphelo Umgca ukusombulula umba kwaye ufumane iindlela ezintsha.
Ukongeza, "ipayipi" yomfanekiso wephupha, ngokuxhomekeke kumxholo wephupha, ikwanomsebenzi wokulumkisa. Ungathanda ukutsala ingqalelo yomntu ophuphayo kwinto ebalulekileyo. Ngokwesiqhelo yintoni kanye kanye le icacileyo emntwini ekubhekiswa kuye xa bejonga wonke umxholo wephupha kwaye bavumela imeko yabo yobomi ukuba iye ekuhlaziyweni kwephupha.
Ukuba uvuthela impempe ngokwakho, ngokutsho kwabaphandi bephupha, kuya kuthatha akukho zinkathazo ukwenza igama lakho. Amarhe okufakwa ngumntu el mundo malunga namaphupha akunakukwenzakalisa. Abantu ababalulekileyo bayayazi ingqibelelo yakho. Umdlalo wakho wombhobho ungabhengeza iindaba ezibuhlungu kunye neenkxalabo ezinkulu malunga nomntu omthandayo.
Ukuba ilizwe lamaphupha limalunga nombhobho umntu ophuphayo awutshayayo, oku impumelelo yeshishini kwaye ikwabonisa ubuntu bokwamkela. Utyelelo lwakwangoko oluvela kumhlobo olungileyo lusondele xa umntu ophuphayo ebona ityhubhu yecuba.
Ukuba omnye umntu utshaya umbhobho, ngokokuchazwa kwephupha, umntu makayeke ukuzola ngakumbi kubuyele ebomini bakhe. Ukuphupha okwangoku kubaluleke kakhulu ukwenza umlinganiso ohambelanayo phakathi koxinzelelo kunye nokuphumla.
Nabani na ophethe ipayipi emile ngentonga yepopsicle esandleni sakhe ephupheni lakhe uya kuphumelela kwinto ethile.
Uphawu lwephupha «umbhobho» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwamaphupha ngokwasengqondweni, kungabaluleka ukutolikwa ngokuchanekileyo kwesimboli yephupha "ukubetha impempe" ngendlela ongayibona ngayo impempe yakho ephupheni. Isandi esimnandi kakhulu nesingxolayo sinokuqondwa njengophawu olusisiqinisekiso esivela kwi-subconscious yokuba into ethile kubomi bephupha ayisiyiyo le nto ifunekayo. ulungelelwano qhubeleka.
Oku kunokuhambelana nemigaqo yokuziphatha ongayilandelanga. Impempe ephezulu ingafuna nokushukumisa umntu ochaphazelekayo kwaye imkhumbuze ngempatho-mbi yomnye umntu. Bahlala bekunyamezele ukona kwabo ngaphaya kwenqanaba elisempilweni.
Kumaphupha atshayayo ngemibhobho kwilizwe lakhe lamaphupha elizaliswe lulonwabo, ubomi benene bumalunga noko paz kunye nobomi bemihla ngemihla obuhambelanayo. Kwakhona umbhobho ufuzisela iqhina eliqinileyo looyise. Kuxhomekeka kwimeko yobomi bobuqu, uphawu lwephupha «umbhobho» lunokuveza umnqweno womntu ophuphayo ukuba neqabane elikhuselayo okanye umhlobo katata.
Uphawu lwephupha «umbhobho» - ukutolika kokomoya
Umbhobho, otshaywayo ephupheni, umele ukutolikwa kwephupha lokomoya uhlobo olukhethekileyo lwe Isikhokelo somoya.
Ukuba umntu ubetha umlozi kwilizwe lamaphupha, oku kunokuqondwa njengesicelo somphuphi ukuba ajongane kakhulu nolwalamano lwakhe lokomoya.